Mareykanka oo howl-gal qarsoodi ah ka wada Soomaaliya - Awdinle Online
Mareykanka oo howl-gal qarsoodi ah ka wada Soomaaliya
Su’aallo dheeraad ah & shaki weyn ayaa ka dhashay diyaarad laga leeyahay Maraykanka oo lagu arkay garoon ku yaalla Soomaaliya.
Diyaaradda King Air turboprop oo ah nooca ay adeegsadaan qandaraasle-yaasha militariga ayaa la arkay, iyada oo taagan garoon diyaaradeed oo ku yaalla gudaha Soomaaliya, sida ay shaaciyeen boggaga wararka ee Baotintuc iyo Okezone.com.
Sidoo kale waxaa la helay caddeymo muujinaya in diyaaraddan oo rakaab aheyd ay wateen qandaraasle-yaal, taas oo muujineyso in Maraykanku uu Soomaaliya ka wada howl-gal qarsoodi ah.
Sawirradan iyo muuqaallo kale ayaa waxaa si dhif & naadir ah loo helay, xilligii ciidanka Maraykanka ah ay baxayeen gudaha Soomaaliya 17-kii January ee sanadkan 2021.
Su’aalaha taagan, islamarkaana la’is weydiinayo ayaa ah qaabka ay diyaaraddan oo ay sameysay shirkada Beechcraft ay uga howl-gashay gudaha Soomaaliya.
Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay lambarka diiwaan-gelinta madaniga ah ee diyaaradda, N27557 oo si sicad uga muuqata sawirka, looma diiwaangalin wax diyaarad ah oo ay ogtahay maamulka duulista federaalka ee dalka Mareykanka.
Si kastaba Mareynkan ka ayaa ka mid ah dalalka ka howl-gallada gudaha Soomaaliya isaga oo qeyb ka ah arrimaha siyaasadda iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Previous articleAbdi Wali Gaas” Ma Aqbaleyno Diktaatooriyad & in Shacabka awood Millateri lagu Caburiyo”
Next articleAkhriso: Midowga Musharaxiinta oo shuruudo adag soo bandhigay